Labada Kuuriya Oo Wadahadal QadkaTaleefanka ah Yeelanaya. | Awdalmedia.com
Labada Kuuriya Oo Wadahadal QadkaTaleefanka ah Yeelanaya.
Arrintan ayaa imaaneysa kaddib markii madaxweyne Kim Jong-un uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada-xaajood la galo xukuumadda Seoul uuna koox u diro cayaaraha. Labada dal ayaanan wada-hadallo heer sare ah yeelan tan iyo bishii December 2015.
Kuuriyada Koofureed ayaa sheegtay in ka qayb-galka Waqooyiga ee cayaaraha la soo dhoweyn doono. Khudbad uu jeediyay Maalinta Sanadka Cusub, ayaa madaxweyne Kim Jong-un wuxuu ka hadlay hoos u dhigidda xiisadda iyo dhalaalinta xiriirka fadhiya ee Waqooyiga iyo Koofurta.
Wuxuu xusay in cayaaruhu ay fursad wanaagsan u yihiin muujinta midnimada shacabka Kuuriyada Waqooyi. Dhanka kale Kuuriyada Koofureed ayaa soo jeedisay wada-hadallo sare, balse weli ma cadda in Kuuriyada Waqooyi ay aqbali doonto iyo in kale, laakiin wada-hadallada ay qadka ku yeelan doonaan ayaa suurto-gelin doona in wada-xaajoodyo horudhac ah ay labada dhinac yeeshaan.